Nera Yokurudzira Kuvandudzwa kweZec
Kubvumbi 05, 2017
Mapato anopikisa aungana zvakare muHarare neChitatu achisimbaradza nyaya yekuti sangano rinowona nezvekufambiswa kwesarudzo rivandudzwe pamberi pesarudzo achiti ave kuita gadziriro yekuratidzira mumigwagwa.
Mapato anopikisa ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reforms Agenda, kana kuti Nera, aungana panzvimbo yaari kudaidza kuti Freedom Square muHarare apo asimbisa nyaya yekupinda mumigwagwa achiratidzira kusafara nekutadza kufambisa basa kwaanoti kuri kuitwa nekomisheni inowona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti Zec.
Mumwe ataura pamusangano uyu uye vari munyori mukuru muMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vaudza vanhu vauya pamusangano uyu kuti vabvumirana semapato ari muNera kuti vachapinda mumigwagwa munguva pfupi iri kutevera zvisinei kuti hurumende inoda here kana kuti kwete vachiti zvose zvinoita kuti sarudzo dzemunyika dzisafambe zvakanaka zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa.
Mashoko aVaMwonzora aya anotevera kurambidzwa nemapurisa kwakaitwa Nera kuita musangano waitwa uyu muAfrica Unity Square vachinzi vaitire kuFreedom Square mapurisa achiti pakati pedhorobha panga pachizoitwa musangano wemakurukota ezvekunze kwenyika emunyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe.
Mumwe wevanhu vauya pamusangano uyu, VaWarship Dumba, vabvumirana nedanho ratorwa nemapato anopikisa ari muNera.
Muzvare Eunice Nyakutsikwa avo vanga vari pamusangano uyu vati hurumende yeZanu PF haifanurwe kuramba ichiregererwa ichityora kodzero dzevanhu.
VaMunyaradzi Banda, avo vataura vakamirira Amai Joice Mujuru vanove mutungamiri webato reNational People’s Party, vati bato ravo rakazvipira kushanda nemamwe mapato ari muNera kuti munyika muitwe sarudzo dzinoremekedza zvido zvevanhu.
Vatiwo sebato riri kushanda nevakarwa muhondo uye rakatsemuka kubva muZanu PF, vanoziva chikiribidi chose chaiitwa neZanu PF mukubirira kwavanoti kunoitwa sarudzo neZanu PF.
Mumwe wevatevedzeri vaVaMorgan Tsvangirai, VaElias Mudzuri, avo vataura vakamirira VaTsvangirai, avo vanzi vari kunze kwenyika, vati chinodikanwa nedechekuti ruzhinji rweZimbabwe rwutaure nezwi rimwechete kwete kusiya VaMugabe vachiita madiro aJojina nehupenyu hweveruzhinji.
Zvichakadai, mapato anopikisa aya ati ave kuda kuti Zec ipwanywe -sarudzo dzofambiswa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC richibatsirana nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations sezvo achiti hurumende yaVaMugabe ikaregwa ichitungamira sarudzo zvakafanana nekuenda kutsime nemugomo wakabooka.
NPF Yonyunyuta kuCOMESA Pamusoro peSarudzo
VeMakarereke Vofora muHarare paZuva reAfrica Day
Vadzidzisi Vanoramba Mari Yavapamidzirwa neHurumende Vachiti Ishoma